Ara-dalana #3 : mozika sy dihy, ankizin’ny CHT | Grandir à Antsirabe
Ara-dalana #3 : mozika sy dihy, ankizin’ny CHT
Araka ny efa nampanantenana dia tamin’ny 15 desambra 2018 lasa teo no natao ny fampisehoana « Ara-Dalana » andiany faha-3 notontosain’ny ankizy ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika.
Taorian’ny seho izay natao tao amin’ny B’art Haingo tamin’ny volana oktobra lasa teo, dia tao amin’ny Alliance Française d’Antsirabe indray ireo mpanakanto vao misandratranay no nampiseho ny talentany.
Niaraka tamin’ireo mpampianatra mozika 3 mianadahy azy ireo izay avy amin’ny tarika Gasy M’Sova sy ny mpanao BD Tsila, nambabo ireo mpijery maro tonga nanatrika ny seho nataon’ny ankizy.
Natao miendrika fampisehoana manamarika ny noely ny seho izay nahitana fahombiazana tokoa ! Indray isaky ny erinandro tao anatin’ny volana maromaro no nianaran’ny ankizy ny mozika teo ihany koa ny fanaovana sary izay natao tao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika, nampisehon’ny ankizy ampahibemaso ny talentany sy ny fivoarana vokatry ny ezakan’izy ireo. Somary nihamafimafy kely ny fanomanana rehefa nihatomotra ny fampisehoana, lasa nanao famerenana in-4 isaky ny erinandro izy ireo. Na dia teo aza ny fahatahorana teo amin’izy ireo ny omalin’ny fampisehoana, vonona ny ankizy, teo ihany koa moa ny famerenana farany hanatsarana ny pitsopitsony.
Mahakasika ny fampisehoana !
Ny maraina no nanaovana ireo fanomanana faramparany teo amin’ny lafiny ara-pitaovana. Ireo ekipa tao amin’ny Grandir à Antsirabe no niaraka nandamina ny toerana sy nandray ireo mpanatrika. Nanomboka teo amin’ny tamin’ny 11 teo no nanomankomana ny zava-maneno ny avy ao amin’ny tarika Gasy M’Sova. Teo amin’ny tamin’ny 1 tolak’andro teo kosa no tonga ny ankizy. Nisy ny fiomakomanana kely maromaro toy ny fandokona ny tarehy talohan’ny niankarana an-tsehatra. Nanomboka tonga tsikelikely ny mpijery teo amin’ny tamin’ny 2 :30 tolak’andro teo nameno ny trano.
Na dia teo aza ny fahatarana, vonona tokoa ny ankizy, niakatra an-tsehatra amin’izay ny mpanankato kely niaraka tamin’ireo mpampianatra azy ireo, tsy adino ilay namana tsy foy « djembés ». Naharitra 1h teo ny fampisehoana nataon’izy ireo izay kanto tokoa, nanao hira vaovao roa hafa vao nianarana izy ankoatran’izay efa nataony tao amin’ny B’art Haingo. Noravahan’izy ireo dihy manentanentana sy hira maredona ny fampisehoana. Nanafana ny sehatra teo ihany koa ny tarika mpandihy Hip Hop All in Street izay sady mpandihin’ny Alliance Française tamin’ilay famoronana « comédie musicale Roméo et Juliette » amin’ny endrika Hip Hop.
Ny ampaham-potoana faha-3 dia natokana feno ho an’ireo hira nolalaovina sy noforonon’ny tarika Gasy M’Sova, hira izay anatin’ny gadona maha gasy tanteraka. Nanasa ny ankizy hampiharam-peo sy mozika aminy farany izy ireo tamin’ny hira famaranana. Babo aoka izany ny mpanatrika, tehaka manakoako no setrin’ny seho rehetra. Taorian’ny fampisehoana dia nisy ny fizarana ody ambavafo izay nomanin’ny ekipa ho an’ny mpanatrika sy ny mpandray anjara rehetra.
Nahavita zavatra tsara ny ankizy, niarahaba azy ireo tamin’izany ny mpitanatana ny Alliance Française, Mr Félix. Amin’ny anaran’ny fikambanana manontolo no hanolorana ny fisaorana feno fankasitrahana ny mpanakanto nampianatra sy ho an’ny Alliance Française tamin’ny fandraisany. Hisaorana ihany koa ny Monde par la main tamin’ny tohana rehetra nataony tamin’iny hetsika tsara iny.
Vao maika mitombo hatrany ny fahavononan’ny ankizy hanohy ny fianarana mozika sy ny sary manomboka amin’ny vola janoary 2019 ary hampiseho izany ezaka sy fianarany izany indray amin’ny taona miditra.
Lire aussi : Portrait Tsitoha : Talen'ny fikambanana Grandir à Antsirabe
MG	Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toe…